Aloka Manga Mahafinaritra Omen’ireo Voninkazon’ny Zakarandahy Mamelana Ao Kathmandu · Global Voices teny Malagasy
Aloka Manga Mahafinaritra Omen'ireo Voninkazon'ny Zakarandahy Mamelana Ao Kathmandu
Voadika ny 11 Mey 2016 3:07 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, Ελληνικά, Español, Esperanto , Italiano, Deutsch, عربي, English
Pikantsary avy amin'ny kaonty Instagram an'i @aannda.
Amin'izao fotoana izao, toy ny tanàna iray miendrika vehivavy hampakarina no fijery an'i Kathmandu, noho ireo zakarandahy manga efa tena ao anatin'ny famelàrany tanteraka. Saingy miaraka amin'ny fiafaràn'ny lohataona, dia io no fotoana farany ahafahantsika mahita ireny voninkazo ireny ao an-drenivohitr'i Nepal.
Soa ihany ireo mponina ao Kathmandu fa tsy leo mizara saripika ahitàna ny tanànany mahafinaritra ety anaty media sosialy.
Ny Kathmandu-n'i @Durbarmargh androany; tsy fahita firy ny lalambe miravaka toy ny fanaony rehefa mamelana ireo zakarandahy eo aminy
Ankoatra ireo setroka sy vovoka kely, tahaka ny inona re izany tsikin'ny zakarandahy ao Kathmandu.
Amin'ny ankapobeny dia karazana zakarandahy roa no hita ao Nepal – Jacaranda mimosifolia sy Jacaranda ovalifolia.
@lochangyawali Betsaka amin'ireo haisoratra no milaza fa ny Jacaranda mimosifolia & Jacaranda ovalifolia no hita ao Nepal. Saingy misy karazany marobe ao.
Jereo ireto sary visivitsy maneho zakarandahy anaty famelàrany tanteraka :
ल्याम्पोष्ट मुनि ज्याकराण्डा 🙂 pic.twitter.com/yG5mOBYndB
Zakarandahy eo ambany andrinjiro.
Lohataona, mamelana tanteraka i Kathmandu sy ireo hazo zakarandahy, somary mahafanina
Maro ireo olona ao Nepal no mandiso ka manafangaro ny zakarandahy amin'ny “shirish”:
Nivelatra sahady ny voninkazon'ny Shirish, tsy mbola nivelatra ihany ny fo [-ko].
Ilay boky tantara malaza “Shirish ko Phool” (Voninkazon'ny Shirish) nosoratan'ilay Nepaley mpanoratra fantadaza, Parijat, no nahatonga io fifangaroana naharitra efa elabe teo amin'ny zakarandahy sy ny shirish io.
O rey olona, antenaiko fa ho fantatrareo hoe zavamaniry samihafa mihitsy ny Zakarandahy sy ny Shirish (karazana Albizia)
Ao amin'ny bilaoginy, Kabi Raj Khatiwada no mitrandraka ny tantara nipoiran'io trangam-pahadisoana amin'ny fanondroana io :
Nahavita manova ny maha-izy azy ilay hazo ny iray tamin'ireo boky tsara indrindra voasoratra tao anatin'ny literatiora Nepaley….Shirish Ko Phool… ary iray isan'ny ankafiziko manokana….Toa kidaladala kanefa dia zava-misy marina…… Ny Shiris Ko Phool dia tantara iray nosoratan'ilay Nepaley mpanoratra fantadaza, Parijat (Bishnu Kumari Waiwa) ary navoaka ihany koa tamin'ny teny Anglisy hoe “The Blue Mimosa / Ilay Mimozà Manga”.
Rehefa nanao ny fandikàna …. tsy haiko hoe nahoana… nalain-dry zareo izay anarana izay… ilay mimozà manga… ary ny sary eo amin'ny fonony… saingy tsy ampy io hanomezana ny diso mombamomba azy ho an'ilay hazo mahafinaritra ao Kathmandu.
Miadana saingy amim-pitandremana, hitan'ireo olona ao Kathmandu ankehitriny ny fahasamihafàna ary fantatr'izy ireo fa hazo zakarandahy ireo.
Nolazaina ho zakarandahy ny voninkazon'ny Shirish. Inona no mety ho hadisoana bebe kokoa noho io?
Raha manga sy mahafinaritra noho ny famelaran'ny zakarandahy i Kathmandu, ireo lemaka any atsimon'ny firenena kosa tondraky ny loko mena marevaka satria mamelana ireo hazo gulmohar novolena eny amoron'ny làlana.
Taorian'ny orana dia mahafinaritra ery ny tontolo iainana miaraka amin'ireo hazo gulmohar mamelana ambanin'ny lanitra madio. Atahorana fotsiny hampijaly ny hafanàna.